XOG: Diblomaasi Soomaali ah Oo ay Booliska Sucuudigu u Haystaan Eedaymo La Xiriira Tahriib. – Hornafrik Media Network
Booliiska Wadanka Sucuudi Carabiya ayaa la’ogaaday in sanadii la soo dhaafey ay mar isku dayeen inay xabsiga dhigaan Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee Magaalada Jidda, kaasi oo ay ku’eedeeyeen inuu ku lug lahaa Howlo Muqalasnimo ah, isla markaana uu xiriir lalahaa kooxo ka shaqeeya falal la xiriira Tahriibka.
Siday qortay Mareegta Alleastafrica, Booliiska Sucuudiga ayaa weydiistay Maxkamada Sare ee wadankaasi iney u soo saarto Ruqsad xarig oo la doonayay in Xabsiga lagu dhigo Qunsul Siyaad, maadaama uu yahay Diblumaasi heysta xasaanad, isla markaana aanay suurto gal u ahayn ciidanku iney iska xiraan amar la’aan.
Isagoo soo xiganaya masuuliyiin iyo Diblumaasiyiin katirsan Dowlada Soomaaliya, Wargeyska waxa uu sheegay in Booliiska Sucuudiga ugu dambeynti lagu qasbay iney ka tanaasulaan isku daygooda ay ku raadinayeen xariga Qunsulka, kadib markii Dowlada Sucuudiga oo ka duuleysa cabasho kaga timid Dowlada Soomaaliya ay arintaasi soo faragalisay.
Mudane Siyaad Maxamuud Shire oo horay sidoo kale u soo qabtay xilka Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee Kenya ayaa la sheegay inuu dafiray eedeymaha loo soo jeediyay, kuwasi oo uu ku tilmaamay kuwo aan sal iyo raad toon ah laheyn, isagoo ugu dambeynti ka badbaaday falkaasi xariga ah ee lala doonayay.
Ilo wareedyo Soomaaliya ku sugan ayaa sido kale sheegay in Siyaad Maxamuud Shire uu markii meesha laga saaray isku dayga booliiska ee ay ku xiri lahaayeen uu u soo safray magaalada Muqdisho, kadib markii uu helay waraaq rasmi ah oo loogu magacaabay Madaxa Hab Maamuuska Madaxtooyada, Hasa yeeshee dadka arintani la socday ayaa ku tilmaamay magacaabista iyo safarka dag daga ee Siyaad uu ku yimid Magaalada Muqdisho mid uu uga gol lahaa inuu uga nasto jahawareerki arimaha la xiriira xariga ay ku raadinayeen Booliiska Sucuudiga oo Warbixino dhowr ah oo ay ka qoreen ku eedeeyay inuu hayo Howlo ka baxsan Shaqooyinka Diblomaasiga.
Hasa yeeshee, Siyaad Maxamuud Shire ayaanan ku sii nagaanin xilka loo magacaabay, isagoo mudo bil ah kadib iska casilay xilkaasi kadib markii ay dhaliilo uga yimaadeen Agaasimihi xiligaasi ee Madaxtooyada, isla markaana iminka haya xilka Safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay, Abuukar Baale oo sheegay in Siyaad Maxamuud Shire aanu qibrad u laheyn xilka loo dhiibay, isla markaana uusan muujin shaqo wanaag.
Culeyska uga yimid Abukar Baale ayaa kuqasabtay Siyaad inuu ku noqdo xilkiisii hore ee Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee Sucuudi Carabiya.
MURAN LAXIIRIRA DAQLIGA SAFAARADA
Dhaliilo joogto ah oo la xiriira Daqliga ka soo baxa Qunsuliyada Safaarada Soomaaliya ee Sucuudiga ayaa loo jeedinayay saraakiisha halkaasi ka shaqeysa oo lagu dhaliilay inaaney soo gudbinin warbixino la xiriira daqliga saxda ee halkaasi ka soo xarooda.
Arintaasi ayaa sare uqaaday walaaca laga qabay suurto galnimada falal musuq maasuq ah ee la’aaminsanaa iney ka jireen safaarada Soomaaliya ee Sucuudiga oo ah Safaarada labaad ee soo saarta daqliga ugu badan ee ay soo saaraan Safaaradaha Soomaaliya dibadaha ay ku leedahay, maadaama ay u adeegto muwaadiniin aad ubadan maalin waliba.
Si kastaba ha’ahaatee, safar uu sidoo kale sanadii hore kuyimid Siyaad Maxamuud Shire magaalada Muqdisho ayey usuurto gali weysay inuu ka gaaro hadafki uu lahaa kadib markii codsi ku’aadanaa in Wasaarada Maaliyadu ay miisaaniyad bille ah u qorto qunsuliyada uu madaxda ka yahay ee Magaalada Jiddah taasi oo uu kugacan seyray Wasiirkii maaliyada ee Dowladii hore, kaasi oo taa badalkeeda ka dalbaday Qunsuliyada iney soo gudbiso warbixin waafi ah oo muujineysa Dhaqaalaha soo gala Qunsuliyada.
Sidoo kale, Wasiirki hore ee Arimaha Dibada, Cabdiraxmaan Beyle ayaa Siyaad u jeediyay digniin ku’aadan in wasiirku uusan u sii dulqaadan doonin soo gudbin la’aanta qunsuliyada ee warbixin dhaqaaleedkeeda, Arintaasi oo noqotay mid uusan ku qancin Siyaad oo la sheegay inu isku haleynayay Madax sare oo ka tirsan Dowlada, isagoo iska dhago tiray walaaca Wasiirka oo sido kale ku’amray Siyaad inuu joojiyo Safarada aan muhiimka aheyn ee uu ku yimaado Magaalada Muqdisho.
Si kastaba ha’ahaatee, Safarada eysan la socon Wasaarada Arimaha Dibada ee ay galaan Diblumaasiyiinta Safaaradaha ayaa ku qasbay Wasaarada Arimaha Dibada Soomaaiya iney soo saarto sharci adag oo la xiriira Safarada Diblumaasiyiinta.
Sharciga cusub ee ay soo saartay Wasaaradda Dibadda oo cadaadis lagu saarayo iney yareeyaan Safarada diblumaasiyiintu ayaa ku’amraya Diblumaasiyiinta Safaaradaha inaanay u bixi karin safaro banaanka ka’ah Wadamada ay ka howl galayaan amar la’aan, iyadoo lagu amray in safar waliba ee ay galayaan ay tahay in marka hore fasax ay uga helaan wasaarada.
Sanadkii 2014 ayaa ciidanka booliska Kenya ay ku xireen Siyaad Maxamuud Shire inti lagu jiray howlgal raaf ah oo ka dhacay magaalada Nairobi, taasi oo sababtay muran diblumaasiyadeed oo dhex maray Soomaaliya iyo Kenya.
Hase ahaatee, booliiska Kenya ayaa ku’adkeystay in Siyaad aanu heysan cadeymo ku filan oo muujinayay xilkiisa diblumaasiyadeed.
Arintaasi ayaa sidoo kale ku qasabtay Dowlada Soomaaliya iney kala soo baxdo Safiirkeeda Nairobi oo lagu soo celiyay magaalada Muqdisho, todobaadyo ka hor inta aysan labada wadan xalinin muranka ka dhaxeeyay
W.Tarjumay: Xafiiska Wararka HornAfrik